SASABA SEA: Izay rehetra ilainao ho fantatra mba hanangonana azy - Ikkaro
firosoana >> toetra >> Sea Glass: Torolàlana ho an'ny mpanangona
Sarin'i Heather (CC BY 2.0)
Ho an'ireo tsy mahalala dia miantso izahay Ranomaso an-dranomasina, ahidrano, fitaratra amoron-dranomasina, na ranomandry an-dranomaso amin'ireo sombin-kazo izay hitantsika fa nopotehina sy nesorina ao anaty ranomasina, renirano, farihy sns, noho ny onja, onja, fasika, vatolampy, vatokely ary mpandraharaha hafa.
Ho fanampin'ireo mpitsabo mpanimba izay nosoratanay, ny ranomasin-dranomasina dia manampy koa ny vera hihoatra ny taona maro ary manome azy io ranomandry, mangatsiaka na mamy.
Zanaka shards vera, naheno azy ireo niantso azy ireo hoe shard an-dranomasina, izay efa an-dranomasina nandritra ny 20 taona mahery, dia manana boribory boribory, miaraka amina famaranana mamy ary marika kely 'C' misy endrika mamiratra kokoa.
Sarin'i Love strachan (CC BY 2.0)
Izy ireo dia avy amin'ny kristaly misy zavatra latsaka ao anaty ranomasina, vaky ary mihaosa rehefa mandeha ny fotoana. Tavoahangy, siny, vera, fitaratry ny varavarankely izy ireo, ary zavatra maro hafa mahaliana toy ny solomaso fiara, na zavatra vita amin'ny vera. Imbetsaka aza izy ireo dia avy amin'ny fanariam-pako na fako izay atsipiny any anaty ranomasina.
Ankehitriny isika dia miaina voahodidin'ny zavatra vita amin'ny vera fa ny SeaGlass izay ahitantsika ny antitra dia avy amin'ny zavatra vitsy kokoa ary indraindray noho ny loko na ny fanamaivanana izay miaro ny fiaviany dia azo tsoahina.
Ireo solomaso, na kristaly ireo dia tena tsara tarehy sy sarotra hita ary be mpampiasa amin'ny firavaka.
Eto aho manandrana mandao a torolàlana raha te hanomboka amin'ny fanangonana an'ireto zaridaina an-dranomasina ireto ianao.
Ny tsy fitoviana eo amin'ny Glass Glass sy ny Glass Glass
Sarin'i hurricanemaine (CC BY 2.0)
Na dia maro aza ny olona tsy manavaka azy ireo ary miantso azy io hoe Glass Glass na Beach Glass mifanakalo, misy fahasamihafana ara-teknika eo amin'izy roa.
Sea Glass: Ireo no masinina ahitantsika an-dranomasina, rano masira.
Glass Glass: dia ireo izay hita ao anaty rano velona, ​​renirano, farihy.
Ireo izay rava ao anaty ranomasina dia manana patina bebe kokoa ary manana endrika mamy kokoa. Noho ny zava-misy fa any an-dranomasina dia misy fihetsiketsehana bebe kokoa noho ny amin'ny faritra mamy sy ny asan'ny sira ary ny tsy fitovian'ny ranomasina.
Ranomaso andriambavy na ranomaso mermaid
Sarin'i kennakenai (CC BY 2.0)
Miantso azy ireo amin'ny teny anglisy izy ireo Ranomaso Mermaids, Ranomaso zazavavindrano. Ny angano dia milaza fa isaky ny maty an-dranomasina dia mimikiaka ireo zazavavindrano ary ny ranomaso latsaka no ilay ahidrano hitanay.
Ny lokon'ny vera an-dranomasina fahita indrindra dia misy mangarahara ("flint" na "fotsy", ampiasaina amin'ny tavoahangy sy siny fahita tsy hita isa amin'ny famaritana rehetra, izay novolavolaina manokana tao anatin'ny 70-100 taona lasa, fitaratra am-baravarankely, kojakoja latabatra sns.), Emeraoda na voasary makirana. maintso (mahazatra an'ny Sprite, 7-up, sakamalao, ary soda hafa antitra hafa) ary aloky ny amber (ao anatin'izany ny vera volontsôkôlà na "volontsôkôlà tavoahangy labiera").
Mena, mavo ary volomboasary dia loko tsy fahita firy hita, toy ny maitso manga-maitso ihany koa.
Sarin'i nathanmac87 (CC BY 2.0)
Amin'ny morontsiraka California sasany izay nandalovan'ilay vera tamin'ny afo alohan'ny nianjera tany anaty ranomasina mahita sombin-javatra tafiditra ao anaty vera isika, io no antsoina hoe Fire GlassTena tsy fahita firy sy tena ankasitrahana ary sarobidy izy io, satria tsy toy ny vatosoa sy vato sarobidy izay tadiavina ny maranitra, ny fahazavana ary ny mangarahara amin'ny firavaka ao anaty kristaly, ny zavatra tsy fahita dia ny sombiny.
SeaGlass amin'ny firavaka
Sarin'i alisonpavlos (CC BY 2.0)
Satria tena tsara tarehy izy ireo ary sarotra ny mahita sombin-javatra, dia ampiasaina amin'ny firavaka izy ireo ary araka ny efa nolazainay, izany dia nanjary maro ny sandoka, na fitaratra na tanana, izany hoe, kristaly misy famaranana mitovy amin'ilay hita ao an-dranomasina fa mila 4 - 8 ora vao azo fa tsy 20 taona mahery takiana amin'ny kristaly voajanahary.
Tokony ho fantatsika izany ny fomba hamantarana ny voajanahary avy amin'ny FAKE. Satria raha mividy isika dia mahalala izay entintsika mody.
Fitaratra an-dranomasina sandoka na kristaly sandoka artifisialy
Satria vokatra tadiavina fatratra izy io ary ampiasaina amin'ny firavaka, asa-tanana, ny olombelona dia nanandrana naka tahaka izay mandany fotoana be amin'ny fomba voajanahary.
Misy fomba maromaro hanatanterahana izany. Poloney amin'ny turners indostrialy, miaraka amin'ny fasika ary koa amin'ny asidra. Raha liana te-hanana anao ianao, vakio ny lahatsoratra ny fomba fanaovana vera an-dranomasina ao an-trano.
Ahoana no hahalalanao raha tena fitaratra ranomasina izy
Misy toetra samihafa izay hanampy antsika hamantatra izany.
Ny fitaratra an-dranomasina dia zara ary sarotra ny mahita azy, koa raha hitanao fa amidiny aminao ny kitapo SeaGlass amin'ny vidiny ambany dia fantatrao fa tsy voajanahary izany.
Fitoviana: Ny sandoka SeaGlass dia mitovy fanamiana kokoa noho ny fizotran'ny indostrialy raha ny tany am-boalohany kosa dia manana faritra voakilasy kokoa noho ny hafa, kisendrasendra.
Firafitra: Sarotra ny manazava amin'ny teny tsara kokoa raha mitady sary. Ny tany am-boalohany dia manolotra ilay antsoin'izy ireo hoe faritra misy mangatsiaka kokoa, raha satin kosa ny sandoka kokoa, noho ny fiasan'ny asidra ampiasain'izy ireo hamoronana azy ary araka ny nolazainay fa mitovy kokoa io.
Glaze sy marika C: Ny Real SeaGlass dia toa siramamy, ary ny fijerena akaiky dia mampiharihary marika "C" mamiratra kokoa noho ny fikaohon-tany. Ireo marika ireo izay tsy dia misy fahitana kely fotsiny indraindray dia famantarana mazava fa singa iray tany am-boalohany izy io, satria mbola tsy nahalala ny fomba hamoahana an'io karazana toetra io izy ireo.
Raha liana ianao mividy Sea Glass, na ho an'ny fanangonana anao, hanaovana asa-tanana, na zavatra vita amin'ity vera ity ho fanomezana dia jereo ireto fivarotana manaraka ireto.
Ebay: Toerana tsara hahitana ranomasina vera namboarina na voajanahary. Hahita singa tena mahaliana ianao ary miaraka amin'ny lavanty dia afaka mahazo zavatra mahaliana ianao raha te hanangona. Fa alao antoka fa tena izy ireo.
Etsy: Ny vavahady ivarotana ireo mpanao asa tanana amin'ny Internet. Ho hitanao ny sombin-javatra marobe sy ny firavaka vita amin'ny vera ranomasina. Amin'ny ankabeazan'ny varotra ny Sea Glass an-tsokosoko dia ho hitanao fa asehon'izy ireo azy io ho toy ny tanana, tumbled na mitovy aminy
Tsy maninona ny mividy satroka artifisialy raha tianao izy ireo na mila azy ireo amin'ny tetikasa iray. Ny zava-dehibe dia tsy voafitaka ianao ary samy mividy voajanahary na artifisialy no manome anao izay novidinao.
Raha amidiny amam-bidy maro ianao amin'ny vidiny ambany dia ahidrano artifisialy
Raha toa ka mitovy ihany koa ny sombintsombiny rehetra
Jereo ny lohahevitra mangatsiaka ary raha manana ny marika C izy
Mba hanaovana an'ity lahatsoratra ity dia namaky sy nampifanohitra ny vaovao tamin'ireo tranonkala rehetra aho.
1 Ny tsy fitoviana eo amin'ny Glass Glass sy ny Glass Glass
2 Ranomaso andriambavy na ranomaso mermaid
4 SeaGlass amin'ny firavaka
4.1 Fitaratra an-dranomasina sandoka na kristaly sandoka artifisialy
4.2 Ahoana no hahalalanao raha tena fitaratra ranomasina izy
5 Aiza no hividy
5.1 Torohevitra mividy
6 Loharano sy loharano